URhulumente wase-USA Utshintshe nje umdlalo we-EV.
Inguquko ye-EV sele iqhubeka, kodwa inokuba ibinomzuzwana nje wokuchitha amanzi. Ulawulo lweBiden lubhengeze ithagethi yezithuthi zombane ezenza iipesenti ezingama-50 kuko konke ukuthengiswa kwezithuthi e-US ngo-2030 kwangoko ngoLwesine. Oko kubandakanya ibhetri, iplagi ye-hybridi kunye neeseli zombane ...
Yintoni i-OCPP kwaye kutheni kubalulekile ukuba yamkelwe ngombane?
Izikhululo zokutshaja izithuthi zombane yitekhnoloji esakhulayo. Kananjalo, ukutshaja indawo yesikhululo sesikhululo kunye nabaqhubi be-EV bakhawuleza bafunde zonke isigama kunye neengcinga. Umzekelo, i-J1772 ekubonweni kokuqala kunokubonakala ngathi kukulandelelana ngokungafaniyo koonobumba kunye namanani. Ayikho njalo. Ixesha elingaphezulu, i-J1772 wil ...
Zeziphi izinto ekufuneka uzazile xa uthenga itshaja ye-EV yasekhaya
Ishaja yeKhaya le-EV iluncedo ekuboneleleni ngemoto yombane. Nazi izinto ezi-5 eziphezulu ekufuneka uziqwalasele xa uthenga itshaja ye-EV yasekhaya. NO.1 Imicimbi yendawo yeshaja Xa uza kufakela ishaja yekhaya i-EV ngaphandle, apho ingakhuselwanga kangako kwizinto, kuya kufuneka ubhatale ...
I-USA: Ukutshaja kwe-EV kuyakufumana i $ 7.5B kwiBhili yeZiseko
Emva kwenyanga yesiphithiphithi, iSenethi ekugqibeleni ifike kwisivumelwano seziseko zophuhliso. Ibhili kulindeleke ukuba ixabise ngaphezulu kwe- $ 1 trillion ngaphezulu kweminyaka esibhozo, ibandakanyiwe kwisivumelwano ekuvunyelwene ngaso yi- $ 7.5 yezigidigidi kulonwabo lwezixhobo zemoto zombane. Ngokukodwa, i-7.5 yezigidigidi zeedola ziya ...
Itekhnoloji edibeneyo isichithile isiQinisekiso sokuqala se-ETL kwiNtengiso yaseNyakatho Melika
Linyathelo elibaluleke kangako lokuba iToint Tech ifumene iSatifikethi sokuqala se-ETL kwiNtengiso yaseNyakatho Melika e-Mainland China EV kwitshaja.
I-GRIDSERVE ityhila izicwangciso kuHola wendlela oMbane
I-GRIDSERVE ityhile izicwangciso zayo zokuguqula isithuthi sombane (i-EV) etshaja iziseko e-UK, kwaye isungule ngokusesikweni i-GRIDSERVE Electric Highway. Oku kuya kubandakanya inethiwekhi ebanzi yase-UK yamandla angaphezulu kwama-50 amandla 'oMbane oMbane' ane-6-12 x 350kW tshaja nganye, kunye ne-300 rapi ...
IVolkswagen ihambisa iimoto zombane ukunceda isiqithi saseGrisi ukuba siluhlaza
I-ATHENS, nge-2 kaJuni (Reuters) -I-Volkswagen ihambise iimoto zombane ezisibhozo e-Astypalea ngolwesiThathu kwinyathelo lokuqala lokuguqula ukuthuthwa kwesiqithi sase-Greece siluhlaza, imodeli urhulumente anethemba lokuyandisa kwilizwe liphela. Inkulumbuso u-Kyriakos Mitsotakis, owenze uluhlaza ...
IColorado yokutshaja iziseko zophuhliso kufuneka ifikelele kwiinjongo zezithuthi zombane
Olu phononongo luhlalutya inani, uhlobo, kunye nokuhanjiswa kweeshaja ze-EV ezifunekayo ukuhlangabezana neenjongo zokuthengisa izithuthi zombane eColorado ngo-2030. Ilinganisa uluntu, indawo yokusebenzela, kunye neetshaja zasekhaya iimfuno zezithuthi zabakhweli kwinqanaba lephondo kwaye iqikelela iindleko zokuhlangabezana nezi mfuno zeziseko zophuhliso. Ukuya ...
Uyibiza njani imoto yakho yombane
Into oyifunayo kukuhlawulisa imoto yombane sisokethi ekhaya okanye emsebenzini. Ukongeza, iitshaja ezingakumbi ngokukhawuleza ziya kunika ukhuseleko kwabo bafuna ukongezwa ngokukhawuleza kwamandla. Kukho amanani okhetho lokutshaja imoto yombane ngaphandle kwendlu okanye xa useluhambeni. Zombini ezilula AC char ...
Zithini iiNdlela 1, 2, 3 no-4?
Kwinqanaba lokutshaja, ukutshaja kwahlulwe kwayindlela ebizwa ngokuba yi "mode", kwaye oku kuyachaza, phakathi kwezinye izinto, inqanaba lamanyathelo okhuseleko ngexesha lokutshaja. Imowudi yokutshaja-IMODE-ngamafutshane ithi into malunga nokhuseleko ngexesha lokutshaja. NgesiNgesi oku kubizwa ngokuba kuyabiza ...
I-ABB yokwakha izitishi ezingama-120 ze-DC eThailand
I-ABB iphumelele ikhontrakthi kwiGunya loMbane wePhondo (i-PEA) eThailand yokufaka ngaphezu kwe-120 yezikhululo ezibiza ngokukhawuleza iimoto zombane kwilizwe liphela ngokuphela kwalo nyaka. Ezi ziyakuba ziikholamu ezingama-50 kW. Ngokukodwa, iiyunithi ezili-124 ze-ABB's Terra 54 zokutshaja ngokukhawuleza ziya kuba ...
Amanqaku okutshaja ee-LDVs anda ngaphezulu kwe-200 yezigidi kwaye anikezela nge-550 TWh kwi-Sustainable Development Scenario
Ii-EVs zifuna ukufikelela kumanqaku okutshaja, kodwa uhlobo kunye nendawo yeetshaja ayisiyiyo kuphela ukhetho lwabanini be-EV. Utshintsho kwezobuchwephesha, umgaqo-nkqubo karhulumente, ucwangciso lwesixeko kunye nezixhobo zamandla zonke zidlala indima kwi-EV yokutshaja iziseko zophuhliso. Indawo, ukuhanjiswa kunye neentlobo zombane vehi ...